वित्तीय व्यवस्थापनको ज्ञान कम भएर कर विवाद
बच्चा जन्माउन साइकल चलाएर अस्पताल पुगिन् मन्त्री
२७ प्रतिशत भूकम्पपीडितको मात्र घर निर्माण
प्रकाण्डलार्इ थुना मुक्त गर्न माग
करेन्ट लागेर एकको मृत्यु, एक घाइते
पेट्राेलमा एक र डिजेलमा दुई रुपैयाँ बढ्याे
‘मिथिला सिने रत्न’ पुरस्कार स्थापना
प्रदेश ३ काे राजधानीका लागि पाँच जिल्ला प्रस्तावित
[फरक संवाद] प्रधानमन्त्रीकाे बाेली मीठाे भएन, सरकारले त बोल्ने होइन काम गर्ने हो : भरतमोहन अधिकारी
आयल निगमको जग्गा फुकुवाका लागि आपूर्तिमन्त्रीको आग्रह
सरोकारवालासँग सुझाव लिइँदै
पर्वतका ११ लघु जलविद्युत् आयोजना अलपत्र
उत्तर कोरियाली नेताद्वारा अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबन्धको आलोचना
विश्वकप २०१८ का पाँच विवाद जाे चर्चामा रहिरहनेछन्
१ साउन २०७५, मंगलवार
फिफा विश्वकप २०१८ दाेस्राे पटक फ्रान्सले जितेसँगै सकिएकाे छ । तर, यसका विवाद र रमाइला पक्षकाे चर्चा अझै थामिएकाे छैन । यसमा जाेडिएका भावना र ट्विस्ट एन्ड टर्न्सकाे पछिसम्म पनि चर्चा भइरहनेछ ।
याे विश्वकपमा जाेडिएका पाँच विवाद:
१. भिएअार युगकाे सुरुवात
फुटबल विश्वकपकाे इतिहासमा याे विश्वकपमा पहिलाे पटक भिडियाे एसिस्टेन्ट रेफ्रीकाे प्रयाेग भयाे ।
मैदानमा भएका गल्तीलाई कतै रेफ्रीले नदेखाकाले निर्णय गर्न असहज नहाेस् भनेर याे टेक्निक प्रयाेग गरिएकाे थियाे ।
तर, यसबारे यसपटक निकै धेरै बहस भयाे । धेरैले भिएअारप्रति असहमति जनाए । यसकाे अालाेचना गर्नेहरुले भिएअारका कारण खेलमा हुने राेमान्चक पलहरु कम भएकाे अाराेप लगाए ।
कतिपय सन्दर्भमा याे प्रयाेग पनि गर्न सकिएन । त्यसैले पनि यसकाे अस्तित्वबारे प्रश्न उठ्याे ।
भिएअारका कारण खेलाडीहरुमाथिकाे अंकुश बढ्याे । र, सन् २०१४ काे भन्दा याे विश्वकपमा १७ प्रतिशत फाउल संख्या बढे ।
२. म्याराेडनाकाे जाेश
अर्जेन्टिनाका महान् फुटबलर डिएगो म्यारोडनालाई बारम्बार विवादहरुसँग पनि जोडिन्छ । त्यसो त उनी जे गर्छन्, खुलेर गर्ने गरेका छन् ।
उनले आफूलाई लागेका विषयमा पनि खुलेरै कुरा गर्ने गरेका छन् । यसलाई उनी स्वयंलाई कहिलेकांही समस्या पर्ने गरेको छ ।
यो विश्वकपमा पनि उनी बारम्बार चर्चाको विषय बने । बहुतै उत्साहित र भावुक भएर आफ्नो टिमको समर्थन गरेको म्यारोडनाले यसपटक स्टेडियममा नै सिगार पिए । पछि उनले यसबारे माफी पनि मागे । त्यस्तै उनले अर्जेन्टिनाले समूह चरणको दोस्रो खेल जित्दा उनले ‘मिडल फिंगर’ देखाइदिए । उनको यस्तो अभ्रद व्यवहारको खुलेरै आलोचना भयो ।
म्यारोडनाले अन्तिम १६ को खेलमा कोलम्बियाली टिमविरुद्ध इंग्ल्यान्डले पाएको पेनाल्टीको पनि खुलेरै आलोचना गरे । यसलाई उनले मैदानमा भएको ठूलो चोरीको संज्ञा दिएका थिए । तर, यो विषयमा पनि पछि उनले माफी मागे ।
३. जापानले विश्वकपलाई फोहोर बनायो
यसपटकको विश्वकपमा जापानले ऐतिहासिक सफलता पायो । उसले अन्तिम ८ का लागि खेलिएको खेलमा ऊ बेल्जियमबाट पराजित भयो ।
समूह चरणका खेलमा अत्यन्त राम्रो गरेको जापानले खेलका कारण मात्र होइन, स्टेडियममा पुगेका दर्शकका कारण पनि प्रशंसा बटुल्यो । खेल सकिएपछि स्टेडियम सफा गरेका र धन्यवाद रुस लेखेको कार्ड छाडेर जापानी दर्शकले निकै प्रशंसा बटुले ।
तर, समूह चरणको तेस्रो खेलमा पोल्यान्डसँग पारजित भएपछि जापानी खेलाडीले कुनै कारणविना मैदानमा एकअर्कासँग पास खेल्न थाले । यसले विश्वकप फुटबल र फुटबल खेललाई नै फोहोर बनाएको विश्वभर चर्चा भयो ।
४. दुई मुखे बाज
खेलाडी तथा देशहरुलाई विश्वकप सुरु हुनुभन्दा पहिले नै फिफाले एउटा सर्तमा राखेको हुन्छ– उनीहरुले राजनीतिक टिप्पणी गर्न पाउने छैनन् ।
तर, स्विट्जरल्यान्डका जाका र शकिरीले सर्बियाविरुद्ध गोल गरेपछि खुसीयाली मनाउने समयमा आफ्नो हातले इशारा गर्दै दुई मुखे बाज बनाए । यसको राजनीतिक अर्थ निकालियो र त्यसबारे निकै बहस पनि भयो ।
उनीहरुको इशाराले अल्बानियाको राष्ट्रिय झन्डालाई इंगित गथ्र्यो । यसका कारण सर्बियाका राष्ट्रवादी र अल्बानियाका मानिसबीच तनाव उत्पन्न हुने अनुमान गरियो ।
उनीहरुले यस्तो संकेत गर्नुको पछाडि पनि राजनीतिक कारण लुकेको छ । शाकिरी कोसोवोको जिलान सहरमा अल्बानियाली मूलको मुस्लिम परिवारमा जन्मिएका थिए । उनी सात वर्षका हुँदा उनको परिवार स्विट्जरल्यान्ड आएको थियो ।
अर्कोतिर शाका पनि अल्बानियाका मुस्लिम परिवारका हुन् ।
युगोस्लोभाकियाबाट छुट्टिएर बनेका ६ देशमध्ये एक सर्बिया पनि हो । तर, सर्बियाको कोसोवो क्षेत्रले आफूलाई छुट्टै देशको माग गरिरहेको छ । त्यसैले उनीहरुको यो संकेतले राजनीतिक अर्थ बोकेको छ ।
त्यस्तै, यो विश्वकपमा अर्को समय पनि राजनीतिको गन्ध आयो जब क्रोएशियाका विदाले टिमको रुसमाथिको जितलाई युक्रेनका मानिसका लागि समर्पित गरे। रुस र युक्रेनबीचको तनावका कारण यो विषयले पनि धेरैको ध्यान तान्यो ।
५. महिला पत्रकारमाथि दुव्र्यवहार
यसपटकको विश्वकपमा मैदानमा मात्र विवाद भएन । रुसको मस्कोमा टेलिभिजनका लागि रिपोर्टिङ गर्न पुगेकी एक महिला पत्रकारमाथि गरिएको हिंसा पनि यो विश्वकपमा चर्चामा रह्यो । कोलम्बियाकी संवाददाता जुलियथ गोन्जालेजमाथि रुसी सडकमा टिभीमा प्रत्यक्ष प्रसारण गरिरहँदा एक व्यक्तिले अचानक उनको स्तनमा हात राखे र गालमा चुम्बन गरे ।
जुलियथले प्रत्यक्ष रिपोर्टिङ रोकिनन् । यसबारे विश्वभर निकै आलोचना भयो ।
ब्राजिलकी एक पत्रकारमाथि पनि यस्तै हिंसा भयो । यी दुवै घटनाले इन्टरनेटमा लामो समय चर्चा कमाए ।
‘मैले एक वर्षका लागि हस्तमैथुन छोडिदिएँ’
आफैँलाई प्रेम गर्न सिक्नुहोस्…
नेपाली शंकराचार्यः भ्रम र सत्यता
फ्रान्स दाेस्राेपटक विश्व च्याम्पियन !
[ म्याच प्रिभ्यु ] कमैले अनुमान गरेकाे फाइनल: क्राेएशिया-फ्रान्समा कसले चुम्ला ट्रफी ?
बेल्जियमकाे इंग्ल्यान्डमाथि सहज जित